Maamulkii Mudug heer gobol iyo heer dagmo oo lakala diray; Maxamud C/Raxman Cuuke oo noqonaya Guddoomiyaha gobolka iyo Duqa Galkacyo. – Radio Daljir
Abriil 22, 2011 12:00 b 0
Garowe, April 21 – Dikreeto uu soo saaray madaxwaynaha Puntland ayaa lagu kala diray dhammaan maamulkii gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo. Madaxwayne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa u magacaabay Maxamuud Cabdiraxmaan Cuuke guddoomiyaha cusub ee gobolka isla markaana ah duqa magaalada Gaalkacyo.
Tallaabadan ayaa qayb ka ah isbaddal baaxad wayn oo dhinaca ammaanka sababsaday kaas oo uu madaxwaynuhu ka shaqeeynayay tan iyo dilalkii iyo weeraradii todobaadkan bilowgiisii ka dhacay xarunta gobolka ee Gaalkacyo.
Madaxwayne Faroole ayaa wada-tashi qoto-dheer oo uu ka sameeyay xaaladda gobolka Mudug guud ahaan iyo gaar ahaan tan Gaalkacyo waxa uu xaalad dag-dag ah galiyay gobolka, waxana uu si ka duwan gobollada kale ee Puntland isku daray guddoomiyaha gobolka iyo duqa degmada Gaalkacyo. Xilkaas ayaa loo magacaabay Maxamuud Cabdiraxamaan Cuuke oo horay u ahaan jiray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarasahda Puntland.
Daahir Maxamuud Muuse iyo Farxaan Cali Xirsi oo horay uga tirsanaa golihii hore ee degaanka ayaa loo sida ay u kala horeeyaan loogu magacaabay guddoomiye kuxigeenka 1aad iyo kan 2aad ee maamulka cusub. Madaxdaan ayaa Sidoo kale waxa ay guddoomin doonaan guddiga amniga gobolka sida ku cad amarka ka soo baxay xafiiska madaxwaynaha.
Madaxdan ayaa la siiyay waajibaad cadcad oo ay ugu mihiimsan yihiin sugidda ammaanka iyo midaynta bulshada ku nool gobolka. Dadka falanqeeya xaaladda ammaanka gobolka ayaa tilmaamaya in mudane Cuuke iyo ku-xigeenadiisaba uu horyaallo waajib aad u ballaaran oo uu ugu wayn yahay sugidda amniga iyada oo gobolkaasi inta badan lagu sheekaysto in uu yahay mid aanay ka shaqayn karin awoodda sharciga.
Gobolka Mudug oo dhaca albaabka koonfureed ee Puntland iyo xaruntiisa Gaalkacyo ayaa indhawaalaba waxaa la soo darsay xaalado ammaan xumo iyo isaga oo caan ku noqday khilaaf ba’an oo goor iyo ayaan dhex yimaada guddoonka gobolka iyo kan magaalada.
Tallaabadan adag ee uu qaatay madaxwayne Faroole ayaa timid kadib markii todobaakan xaaladda ammaan ee magaalada Gaalkacyo ay gaadhay figtii ugu sareeyay, halkaas oo lagu dilay Sheekh Ismaaciil Xaashi Xuseen isla markaana tallaabooyin lagu fasiray aargoosi lagu weeraray masaajid ku yaal magaalada. Guud ahaa weeraradaas ayaa waxa ku dhintay illaa afar qof halka siddeed kalena ay ku dhaawacmeen.
Wixii faahfaahin ah kala soco daljir.com